Ganacsade Soomaali ah oo lagu dilay Koonfur Afrika “SAWIRRO” | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ganacsade Soomaali ah oo lagu dilay Koonfur Afrika “SAWIRRO”
Ganacsade Soomaali ah oo lagu dilay Koonfur Afrika “SAWIRRO”
Cape Town (SONNA) Ganacsade Soomaali ah ayaa lagu soo waramayaa in koox hubeysan ay ku dhex dileen gaari uu watay xili uu kusii jeeday Dukaankaankiisa oo ku yaalay deegaanka Khayelitsha ee hoosyimaada magaalada Cape Town ee dalka South Africa.
Shaqsiga la dilay ayaa waxaa uu ahaa ganacsade si weyn looga yaqaano magaalada Cape Town iyo nawaaxigeeda, waxaana lagu magacaabi jiray Axmed shire Nuur (Miig shire).
Qof goob jooge ahaa oo aan la hadalnay ayaa sheegay in dilka muwadinkaasi Soomaaliga ah sababta keentay uusan ahyen isir naceyb balse waxay u badantahay in ay ahaayeen dadka dilka geystay kuwa doonayay iney dhacaan hanti saarneyd gaariga maadaama uu sanadku dhamaadyahay oo xillilyadaan oo kale uu kordho dhaca iyo dilka.
Ciidamada booliska dalka South Africa ayaa wada baaritaanno arrintaasi ku aadan oo lagu raadinayo dambiilayaasha geystay falkaasi dilka ah ee argagaxa leh.
Khamiistii lasoo dhaafay ayey aheyd markii laba wiil oo walaala ah lagu dilay deegaan u dhaw magaalada Johannesburg ee dalka South Africa, kuwaas oo hal dukaan ka wada shaqeeynayay, waana astaan muujineysa in uu markale uu soo badanayo dilalka iyo dhaco loo geysto dadka ajaanibta ah ee ku nool dalka South Africa, waxaana Ciidamada ammaanka ay xaqiijiyeen in bisha December ee sanadkasta ay kordhaan dilalka, dhaca iyo shilalka gawaarida.
Previous articleR/wasaare Kheyre oo ka qeyb-galay Munaasabad lagu soo bandhigay waxqabadka Xukuumadda
Next articleGolaha wasiirada cusub ee Zimbabwe oo la dhaliilay